Amazon Kupesana nenyika! | Martech Zone
Chitatu, December 21, 2011 China, June 18, 2015 Andrew Davis
Amazon ikozvino yakamira seimwe yezvinhu zvine simba kwazvo zvekutengesa pasi rese. Nemamirioni evakaoma-vatengi uye vateveri, yakadenha kwete chete vamwe vatengesi pane uye kunze, asi ese epamhepo kushambadzira chiteshi.
Chigadzirwa chitsva cheAmazon, iwo Kindle Moto, chakatora kushoropodza kwakanyanya svondo rapfuura. Zvisinei, kutengesa kuchiratidzika kunge kwakashata, ne zvinopfuura 1 mamiriyoni Kindle (kusanganisira Kindle Fire) zvikamu zviri kutengeswa pavhiki kwevhiki yechitatu yakateedzana.
Sezvo sosi yemari hombe yemigwagwa inokwanisa, Amazon yakakosha kwete chete kune vatengi asi kuzviuru zvevatengesi nevaparidzi vanonyora zvigadzirwa zvavo pamusika uye kuburikidza neAmazon's PPC kushambadzira chirongwa, Amazon Product Ads.
Tarisa uone infographic (A CPC Strategy Chekutanga!) Kuti uone maAmazon anorwa sei ivo vanokwikwidza kune yakakura misika yekutengesa neyekushandira nyika.
Tags: Amazoncpc zanoecommerce
Zvita 21, 2011 na10: 54 PM
Ndatenda zvikuru nekugovana izvi. Pane zvakawanda zvakanaka zviwanikwa pano. Ndine chokwadi chekuti ndichashanyira nzvimbo ino zvakare munguva pfupi iri kutevera.